Nigeria oo diwaan galisey nooca cusub ee covid 19 ee laga helay ingriiska. – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Nigeria oo diwaan galisey nooca cusub ee covid 19 ee laga helay...
Nigeria ayaa diiwaan gelisay afar xaaladood oo ah Cudurka faafa ee aadka loo kala qaado ee loo yaqaan ‘COVID-19’ oo ah nooca loo yaqaan ‘B117’, oo markii ugu horreysay laga soo sheegay Britain, iyadoo weli la sugayo tallaallo ka dhan ah fayraska, ayay dowladda Nigeria sheegtay Isniintii.
Saddex kiis ayaa laga helay dadka reer Nigeria ee ka dhoofay dalka, midna waa degane, ayuu yidhi Boss Mustapha, xoghayaha dawladda federaalka ahna guddoomiyaha kooxda Task Force (PTF) ee COVID-19, shir jaraa’id oo maalinle ah. .
Mustapha wuxuu sheegay in todobaadyadii la soo dhaafay, PTF uu si dhow ula socday tirada sii kordheysa ee infekshannada maalin kasta laga soo sheego Nigeria halka saynisyahannadu ay kala saarayeen noocyada fayraska.
Markii la tijaabiyay, culeyskan ayaa laga helay toddobaad gudihiis markii uu ku laabtay Nigeria. Tani waxaa naloo soo sheegay iyada oo loo marayo xeerarka caalamiga ah ee caafimaadka waana lagama yaabo in culeyskan laga helay Nigeria, ”ayuu yiri Chikwe Ihekweazu, oo ah agaasimaha guud ee Xarunta Xakamaynta Cudurada ee Nigeria (NCDC), isagoo sii iftiiminaya horumarka cusub ee isla shirkii jaraa’id ee Isniinta.
Ihekweazu wuxuu sheegay in hay’addiisu ay sii wadi doonto xoojinta la socodka iyo kala-goynta genomics iyadoo la kaashanaysa la-hawlgalayaasheeda, maadaama la joojinayo safarada caalamiga ah aan la gaari doonin wax badan illaa iyo inta uu fayrasku wali ku sii faafayo dalal kale.
Si kastaba ha noqotee, waddanku wuxuu kordhinayaa xiritaanka fudud ee bil kale, isaga oo ku sababeynaya tirada sii kordheysa sababta.
Nigeria ayaa lafilayaa in ay hesho 100,000 oo doos oo ah talaalka COVID-19 horaanta bisha soo socota, iyada oo dadaalada lagu doonayo in la geeyo ay socdaan, sarkaalka ayaa yiri.
“Waxaan rabnaa inaan u xaqiijino dhamaan dadka reer Nigeria in talaaladu ay ahaan doonaan kuwo nabdoon oo wax ku ool ah marka ugu dambeyn la geeyo. Waxaan ku boorineynaa qof walba inuu ka qeybqaato ololaha si loo ciribtiro caqiidada tallaalka, ”ayuu yiri.
Wasiirka caafimaadka Osagie Ehanire ayaa shirkii jaraa’id ee Isniintii ka sheegay in dowladdu ay baareyso dhammaan xulashooyinka si loo hubiyo tallaalka boqolkiiba 70 ee dadka reer Nigeria muddo laba sano gudahood ah.
“Iyada oo isha lagu hayo qiimaha-lacagta, waxaan la xaajooneynaa dhinacyo badan waxaanan qorsheyneynaa fulinta qalad la’aanta iyadoo la adeegsanayo qibradeyntii ugu dambeysay ee ciribtirka cudurka dabeysha iyadoo la wajahayo isku dhac caalami ah oo dhanka tallaalada ah,” Ehanire ayaa raacisay.
Previous articleNigeria confirms its initial cases of British COVID-19
Next articleNooca cusub ee COVID-19 oo ka Bilaabmey wadamo Afrika ah sida ay sheegtey CDC
Xaaf oo ka hadlay Nabadoonkii lagu dilay Gaalkacyo